Wholesale Professional Long Coat Pet Conditioner Miaraka amin'ny Famokarana sy Mpamatsy Fahombiazana tsara indrindra |Skylark
Telefaonina: +86 18908183680
Matihanina High-Efficiency Chlorine Bleaching Powder Wi ...
Super High-Efficiency Clothing Deoiling miaraka amin'ny ...
Degreaser an-dakozia tena mandaitra miaraka amin'ny fampisehoana tsara
Matihanina Bio-enzyme Deodorizer spray ho an'ny biby fiompy ...
Matihanina Pet De-Greaser miaraka amin'ny fampisehoana tsara
Matihanina Long Coat Pet Conditioner Miaraka Amin'ny Fahombiazana Tsara
Ny vokatra dia afaka manasa tsara ny sisa tavela ary miditra amin'ny epiderme, manatsara ny combability malefaka sy maina, ary manatsara ny fiantraikan'ny moisturizing ny volo.
FIFANDRAISAM-mpivarotra ambongadiny, mpivarotraSYmpanamboatrany vokatra fanadiovana sy fikarakarana biby fiompy avo lenta.Afaka mamokatra vokatra Logo araka ny fepetra takinao izahay.Mifantoka amin'ny fanomezana vokatra mahomby, mitsinjo ny tontolo iainana, avo lenta, mivondrona izahay.
Raha misy fanontaniana dia faly izahay hamaly, pls mandefa ny fanontaniana sy ny baiko.
Santionany tahiry dia maimaim-poana & azo alaina
Ny karazana saka sy alika lava akanjo
Fa mandro lava-palitao saka sy alika na inona na inona karazana.
OEM/ODM, ambongadiny, antsinjarany
Hanitra, famaritana, loko, fitoeran-javatra, fonosana
MOQ ho an'ny Customize
MOQ ho an'ny tahiry
400ML * 12 tavoahangy / ctn
500ML * 24 tavoahangy / ctn
1L * 6 tavoahangy / ctn
5L * 4 tavoahangy / ctn
HOY NY FITAKIANAO
Arak'izay natolotry ny PRO
BOURENA Long Coat Pet Conditioner dia vokatra tsara "mifototra amin'ny biby fiompy" izay mahafeno ny fenitra EU tsy misy loko, menaka silisiôna.Ny vokatra dia afaka manasa tsara ny sisa tavela ary miditra amin'ny epiderme, manatsara ny combability malefaka sy maina tsy manalefaka ny volon'ny biby fiompy., izay mampitombo ny kalitaon'ny volom-biby.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia miditra ao amin'ny stratum corneum izy mba hanamboarana ny triatra anatiny ary hanatsara ny fiantraikan'ny moisturizing ny volo.
Famaritana ny fampiasana
1. Tokony hampiasaina aorian'ny fampiasana ny shampoo BOURENA pet na shampoos ho an'ny biby fiompy BOURENA.
2. Atsipazo ao anaty milkshake ny conditioner sy ny rano amin'ny ratio 1: 8, aidino amin'ny felatananao.
3. Apetaho mivantana amin'ny volo ilay diluent ary apetaho amin'ny rantsantanana mandritra ny 3 minitra.
4. Kobanina amin’ny rano mafana mba hanesorana ny sisa tavela amin’ny shampoo.
5. Amainina amin'ny fomba mahazatra ny volonao sy ny fomba.
Soso-kevitra amin'ny fampiasana
Ity vokatra ity dia asaina ampiasaina miaraka amin'ny shampoo biby BOURENA mifanaraka amin'ny halavan'ny volo sy ny lokony mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
● Azafady, diovy tanteraka ny volom-biby rehefa mandro mba tsy hilelaka ny ambiny na hifandray amin'ny maso ny biby fiompy.Mety hiteraka fahasosorana amin'ny trakta fandevonan-kanina ny filelaka be loatra amin'ny fandevonan-kanina ary miteraka ritra maina ny biby fiompy.
● Fampiasana ivelany ihany.
F: Afaka manana ny famolavolana manokana ho an'ny vokatra & fonosana ve aho?
A: Eny, afaka OEM araka izay ilainao.Omeo fotsiny ny sanganasan-kanto natao ho anay.
F: Ahoana no ahafahako mahazo santionany?
A: Afaka manome santionany maimaim-poana ho an'ny fitsapana alohan'ny filaminana, mandoa fotsiny ny vidin'ny courier.
F: Inona ny fepetra fandoavam-bola?
A: 30% T / T petra-bola, 70% T / T fifandanjana fandoavam-bola alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no ataon'ny orinasanao momba ny fanaraha-maso ny kalitao?
A: Manana strict izahayfanaraha-maso ny kalitaorafitra, ary ny manam-pahaizana matihanina dia hijery ny fisehoana sy ny fiasan'ny fitsapana ny entana rehetra alohan'ny fandefasana.
teo aloha: Matihanina Short Coat Pet Conditioner Miaraka amin'ny Fahombiazana Tsara
Manaraka: Mpampiasa fantson-drano tena mandaitra miaraka amin'ny zava-bita tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manitatra mafy ny tsena any ivelany sy ny famolavolana manerantany.Ao anatin'ny telo taona manaraka, dia manolo-tena ho iray amin'ireo orinasam-panondranana folo ambony ao amin'ny indostrian'ny simika isan'andro ao Shina izahay, manompo an'izao tontolo izao amin'ny vokatra avo lenta ary hahatratra ny toe-javatra mandresy amin'ny mpanjifa bebe kokoa.
douche biby fiompy
Professional Pet Coat Smooth Liquid miaraka amin'ny Excell...
Professional Short Coat Pet Shampoo Miaraka amin'ny Excell...
Professional Long Coat Pet Shampoo Miaraka amin'ny Excelle ...
Professional Short Coat Pet Conditioner Miaraka amin'ny Ex...
Matihanina Pet Foot Fanadiovana Foam Miaraka Excell...